ဒီနေ့, people pay more and more attention to the quality and style of the led bathroom mirror cabinet. ဥပမာ, the bathroom furniture cabinets should not only haveagood appearance and decoration but also increase the storage function of the toilet. သို့သော်, စျေးကွက်တွင်ရောင်းရန်ရေချိုးခန်းအချည်းနှီးသောအမျိုးမျိုးရှိသည်. ရေရှည်အသုံးပြုမှုပြီးနောက်, ကက်ဘိနက်၏ပုံပျက်သောမကြာခဏတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်. ဒီအခြေအနေကိုရှောင်ရှားရန်? ထို့နောက်ဖရန့်ခ်သည်ရေချိုးခန်းအချည်းနှီးနှင့်ပုံးများ၏ပုံပျက်မှုများကိုကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းများစွာကိုမျှဝေခဲ့သည်.
ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရမယ်, the deformation of the bathroom cabinet is mainly due to the following three factors:
ပထမတစ်ခုမှာရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အရည်အသွေးသည်စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်ဖြစ်သည်; ဒုတိယတစ်ခုမှာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကာလအတွင်းတိုးမြှင့်ခြင်းကြောင့်ပစ္စည်းများမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအကာအကွယ်ပေးသည့်ရုပ်ရှင်သည်ပျက်စီးခြင်းဖြစ်သည်; the third is that the toilet is too humid and the wood is exposed to the humid environment foralong time.
1.ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, ရေချိုးခန်းကက်ဘိနက်ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါ, ၎င်း၏အမှတ်တံဆိပ်အလွန်အရေးကြီးပါသည်.
စျေးကွက်တွင်ရေချိုးခန်းဗီရိုအမျိုးအစားများစွာရှိသည်, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တဲ့အခါရှုပ်ထွေးဖို့လွယ်ကူသည်. ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရမယ်, ကောင်းတဲ့အမှတ်တံဆိပ်အတွက်, quality and after-sales are more guaranteed. ရေချိုးခန်းကက်ဘိနက်ရတဲ့ပြီးနောက်, ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ခုန်အမှတ်အသားများရှိမရှိစစ်ဆေးပါ. ရှိလျှင်, အချိန်မီပြန်လာရန်ကုန်သည်ကိုရှာပါ.
2.When installing the washbasin on the bathroom wall cabinets, ပူးတွဲဖန်ကော်နှင့်တံဆိပ်ခတ်ရပါမည်. ယင်းသည်ကွာဟမှုမှတစ်ဆင့် ၀ န်ကြီးထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်, which will lead to moisture in the entire storage area, resulting in material deformation and evenapeculiar smell. ဒီအချိန်မှာ, the bathroom cabinet can not only playarole in storage but also affect the mood of the whole day.
3. ရေချိုးခန်းကက်ဘိနက်အပေါ်အစိုဓာတ်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုလျှော့ချနိုင်ရန်အတွက်, အိမ်သာလေဝင်လေထွက်ထားရှိရပါမည်.
ရေချိုးခန်းထဲတွင်ပွင့်နေသောပြတင်းပေါက်များနှင့်အိပ်ဇောပန်ကာလိုအပ်သည်, ကခြောက်သွေ့စိုစွတ်သောခွဲခြာကိုစောင့်ရှောက်ရန်နိုင်ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, သငျသညျပိုမိုမြင့်မားကက်ဘိနက်ခြေထောက်နှင့်အတူရေချိုးခန်းကက်ဘိနက်ကိုရွေးချယ်ဖို့ပိုကောင်းရှိသည်, and witha304 stainless steel footpad, ကက်ဘိနက်၏နောက်ဘက်သည်နံရံနှင့်နီးကပ်စွာမနေပါ, ထိရောက်စွာမြေပြင်နှင့်နံရံပေါ်ရှိအစိုဓာတ်ကိုသီးခြားခွဲထုတ်ရန်.
4.များသောအားဖြင့်လည်းရေချိုးခန်းဗီရို၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုအာရုံစိုက်ပါ, အချိန်မီကက်ဘိနက်ပေါ်တွင်ရေကို clean.
ဘဝမှာ, ရေဆေးခြင်းနှင့်ထိပုတ်ခြင်းတို့မှရေပွားများမလွှဲမရှောင်သာဖြစ်သည်. သို့သော်, the joint between the basin and the table should be kept dry to prevent splashing water from staying on the cabinet surface foralong time, ကက်ဘိနက်၏ပစ္စည်းပုံပျက်သောရရှိလာတဲ့. ဒီအချိန်မှာ, ကြွယ်ဝတဲ့အမြှုပ်ရွေးချယ်ပါ, ပျော့ပျောင်းသောရေပိုက်သည်ရေချိုးခန်းဗီရိုကိုကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်.
Above are the maintenance skills of the led bathroom mirror cabinet. သငျသညျရေချိုးခန်းအချည်းနှီးသောပုံးဝယ်ယူရန်အတွက်ပိုမိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြံဥာဏ်နှင့်အသိပညာလိုအပ်ခဲ့လျှင်, please contact Frank.
အမှတ်အသားများ (Tags): LED bathroom mirror cabinet, Maintenance tips for bathroom vanity cabinets